ထိရောက်သောမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း Push Notification Engagement အတွက်ထိပ်တန်းအချက်များ Martech Zone
မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းသည်၎င်း၏အသုံးပြုသူများကိုမည်သို့ဆွဲဆောင် (ထိန်းသိမ်းထား) နိုင်သနည်း။ ဘယ်လိုလုပ် သင့်ရဲ့ မက်ထရစ်စက်မှုလုပ်ငန်းပျမ်းမျှနှင့်နှိုင်းယှဉ်? Pushwoosh သည်တက်ကြွသောသတင်းထုတ်လွှင့်မှု ၁၀၄ ခုရှိသည့် push notification system ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးသင့်အားဖြေဆိုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Pushwoosh ၌ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ရာများမှတွန်းအားပေးသောသတိပေးချက်မက်ထရစ်သည်သုံးစွဲသူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွင်မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်း၏အောင်မြင်မှုကိုများစွာအထောက်အကူပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လတ်တလော သတိပေးချက်အခြေခံစံနှုန်းသုတေသနတွန်းအားပေး ဖော်ပြခဲ့သည်
ပျှမ်းမျှ ကလစ် - မှတဆင့်မှုနှုန်း (CTR နည်းiOS အတွက် media application များအတွက် 4.43% နှင့် Android တွင် 5.08% ရှိသည်
ပျှမ်းမျှ opt-in မှုနှုန်း iOS အတွက် ၄၃.၈၉% နှင့် Android တွင် ၇၀.၉၁% ရှိသည်
ပျှမ်းမျှ တွန်းအားပေးစာတိုပေးပို့မှု၏ကြိမ်နှုန်း တစ်နေ့လျှင်3တွန်းသည်။
12.5X ပိုမိုမြင့်မား ကလစ် - မှတဆင့်နှုန်းထားများ Android တွင် iOS နှင့် 13.5X ပိုမိုမြင့်မားသော CTR များ၊
1.7X ပိုမိုမြင့်မား opt-in နှုန်းထားများ iOS နှင့် 1.25X တို့အတွက် Android တွင် opt-in နှုန်းပိုမိုမြင့်မားသည်။
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာအမြင့်ဆုံးအသုံးပြုသူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမက်ထရစ်ဖြင့်မီဒီယာအက်ပ်များသည်တူညီသောတွန်းအားပေးသတိပေးချက်ကြိမ်နှုန်းရှိသည်။ သူတို့သည်ပျမ်းမျှကဲ့သို့နေ့စဉ် ၃ ကြိမ်တွန်းပို့သည်။
ဦး ဆောင်သောမီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းများသည်သူတို့၏စာဖတ်သူများနှင့်ထိတွေ့ရန်မည်သို့အောင်မြင်သနည်း ထို ထိရောက်စွာ? ဤတွင် Pushwoosh လေ့လာမှုအတည်ပြုခဲ့သည်သောနည်းစနစ်များနှင့်အခြေခံမူဖြစ်ကြသည်။
အချက် ၁။ Push အကြောင်းကြားစာတွင်ပေးပို့သောသတင်းများ၏အမြန်နှုန်း
သတင်းကိုပထမ ဦး ဆုံးချိုးဖောက်ချင်တယ် - ဒါကလုံးဝအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုသေချာအောင်လုပ်မလဲ။
မြန်နှုန်းမြင့်ကိုသုံးပါ အကြောင်းကြားစာတွန်း သတင်းသတိပေးချက်များကို 100X မြန်ဆန်စွာပျမ်းမျှထက်ရောက်အောင်ပို့ပေးသည်
မီဒီယာအက်ပ်များသည်သူတို့၏သတိပေးချက်ပေးပို့ခြင်းကိုမြန်စေသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံမှ CTRs သည် ၁၂% အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်လေ့လာမှုတွင်ဖော်ပြခဲ့သောအနည်းဆုံးနှစ်ဆဖြစ်သည်။
အဆင်ပြေအောင် အယ်ဒီတာအဖွဲ့လုပ်ငန်းစဉ် တွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာပို့ခြင်းအဘို့
အကြောင်းအရာများကိုတွန်းခြင်းမှတစ်ဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်လျင်မြန်ပြီးလွယ်ကူသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ မည်သူမဆို သင့်မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းတွင်။ တစ်မိနစ်အတွင်းသတင်းနှင့်ရှည်လျားသောသတင်းများကိုဖြန့်ဝေရန်ခွင့်ပြုသည့် push notification software ကိုရွေးချယ်ပါ။ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း၎င်းသည်သင့်အားအလုပ်ရက်ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးသက်သာစေနိုင်သည်။
အချက် ၂ - Push အကြောင်းကြားစာအတွက် Custom Opt-in Prompt တစ်ခု
ဒီမှာရိုးရှင်းတဲ့လှည့်ကွက်တစ်ခုပါ။ ပရိသတ်ကိုမေးပါ ဘယ်အကြောင်းအရာများ သူတို့ကသူတို့လိုချင်တာလားမေးမယ့်အစားအကြောင်းကြားချင်တယ် မည်သည့် အသိပေးချက်များ မှာအားလုံး.
ဤ app သည်သင်၏ app တွင် opt-in နှုန်းပိုမိုမြင့်မားစေလိမ့်မည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသောအပိုင်းအစများနှင့်တိကျသောပစ်မှတ်ထားမှုကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်မြှင့်တင်တဲ့အကြောင်းအရာဟာသက်ဆိုင်မှုရှိမရှိသင်စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူး - စာဖတ်သူတွေကသူတို့ဆန္ဒအလျောက်လက်ခံရရှိမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲရလိမ့်မယ်။ ရလဒ်အနေနှင့်သင်၏ထိတွေ့မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာမက်ထရစ်များကြီးထွားလာလိမ့်မည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ CNN Breaking US & World News app (ဘယ်ဘက်တွင်) နှင့် USA Today အက်ပ် (ညာဘက်တွင်) တွင်ပြသထားသော subscription prompt ၏ဥပမာနှစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော်သတိထားပါ - သင်ကြီးပွားလိုသော်လည်း ကောင်းစွာ - segment ရွေးချယ်ထားသောသုံးစွဲသူများ၏အခြေခံအနေဖြင့်၊ သင်၏ push အကြောင်းကြားစာပေးသွင်းသူစာရင်းကိုနည်းလမ်းအားလုံးဖြင့်ချဲ့ထွင်လိုမည်မဟုတ်ပါ။
Pushwoosh အချက်အလက်လေ့လာမှုကမြင့်မားသော opt-in နှုန်းသည်သင်၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်မြင့်မားသောအသုံးပြုသူနှင့်ထိတွေ့မှုအတွက်အာမခံချက်မဟုတ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်
ထွက်သွားတာလား segment သည်သော့ချက်ဖြစ်သည်၊
Factor 3: Push အကြောင်းကြားစာအသုံးပြုသူအပိုင်း
ပရိသတ်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် ဦး ဆောင်သောမီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းများသည်အသုံးပြုသူများ၏ဂုဏ်သတ္တိများ (အသက်၊ နိုင်ငံ)၊ စာရင်းပေးသွင်းထားသည့် ဦး စားပေးမှုများ၊ အတိတ်အကြောင်းအရာသုံးစွဲမှုနှင့်အချိန်နှင့်အမျှအပြုအမူများအရ ဦး ဆောင်သည့်မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းများသည်သူတို့၏အသိပေးချက်များကိုပစ်မှတ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံအရ၊ အချို့သောကြေညာသူများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ CTR များကို ၄၀% နှင့် ၅၀% အထိတိုးများလာသည်။
အချက် ၄: Notification Personalization ကိုနှိပ်ပါ
အပိုင်းကကူညီသည် သငျသညျ သင်၏စာဖတ်သူများ၏အကျိုးစီးပွားကိုအသိအမှတ်ပြုပါ။ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဤအတောအတွင်းကူညီသည် ပရိသတ်ကို သင့်မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းကိုအခြားသူများအကြားအသိအမှတ်ပြုပါ။
သင့်မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်း၏တွန်းအားပေးမှုသတိပေးချက်များကို element မှစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ၊ ခေါင်းစဉ်မှသင်၏မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းကိုအချက်ပြသည့်အသံအထိ။
စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာထိတွေ့မှုကို emojis (လိုအပ်ပါက) ထည့်ပါ။ သုံးစွဲသူ၏နာမည်နှင့်စတင်ခြင်းဖြင့် subscription ကိုကမ်းလှမ်းပါ။ ထိုကဲ့သို့သောတက်ကြွသောပါဝင်မှုများဖြင့်သင်၏ push အကြောင်းကြားချက်များသည် CTRs တွင် ၁၅ မှ ၄၀% တိုးနိုင်သည်။
အချက် ၅: သတိပေးချက်အချိန်ကိုက်တွန်းပါ
Pushwoosh ၌ကျွန်ုပ်တို့စုစည်းထားသည့်ကိန်းဂဏန်းများအရ၊ CTRs အမြင့်ဆုံးသည်အင်္ဂါနေ့၊ ၆ နာရီမှည ၈ နာရီအကြားတွင်သုံးစွဲသူများ၏ဒေသအချိန်ဖြစ်သည်။ ပြappsနာကမီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏အသိပေးချက်များအားအချိန်အတိအကျသတ်မှတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ မကြာခဏဆိုသလို၊ အယ်ဒီတာများသည်၎င်းတို့၏တွန်းအားပေးမှုသတိပေးချက်များကိုကြိုတင်စီစဉ်။ မရနိုင်ပါ - ၎င်းတို့သည်ဖြစ်ပျက်သည်နှင့်သတင်းကိုထုတ်လွှင့်ရမည်။
မည်သည့်မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းကိုမဆိုလုပ်နိုင်သည်မှာအသုံးပြုသူများသည်သတိပေးချက်များကို နှိပ်၍ ထင်မြင်ချက်များကိုဖော်ပြရန်နှင့်ကြာမြင့်စွာဖတ်ရန်အချိန်များသောအချိန်ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်ရန်အကြံပေးချက်အချို့ -
A / B ကိုစမ်းသပ်အချိန်ဘောင်များနှင့်ပုံစံများကိုအပ်
ဤနည်းသည်မီဒီယာအက်ပ်သည်ပြproblemနာကိုအချိန်မရွေး၊ မရွေးဘဲအသိပေးချက်များဖြင့်ဖြေရှင်းရန်၊ ရွေးချယ်ခြင်းကိုလျှော့ချရန်နှင့်အသုံးပြုသူနှင့်ထိတွေ့မှုတိုးပွားစေရန်ဖြစ်သည်။
Factor 6: Push ကိုအကြောင်းကြားစာကြိမ်နှုန်း
မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုပေးပို့လိုက်လေလေ CTR များပိုမိုနိမ့်လေလေဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် - ဤဖော်ပြချက်သည်မှန်ကန်သည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါသလား။
Pushwoosh အချက်အလက်များလေ့လာမှုအရ push notification frequency နှင့် CTR သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမမှီခိုကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ metric နှစ်ခုအကြားမတည်ငြိမ်သောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။
လှည့်ကွက်တစ်ခုမှာဤသည်မှာသေးငယ်သည့်ထုတ်ဝေသူများဖြစ်ပြီးတစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးသောတွန်းအားပေးရန်ဖြစ်သည် - များစွာသောကိစ္စများတွင်သူတို့သည်ပရိသတ်ပရိသတ်၏ ဦး စားပေးများကိုနားလည်ရန်လုံလောက်သောနားမလည်သောကြောင့်မြင့်မားသော CTRs မရနိုင်ပါ။ ကြီးမားသောကြေညာသူများသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်တစ်နေ့လျှင်အသိပေးစာ ၃၀ ခန့်ကိုမကြာခဏပေးပို့လေ့ရှိသော်လည်းသက်ဆိုင်ရာနှင့်ထိတွေ့မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။
ကြည့်ရတာအကြိမ်ရေအရေးကြီးတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်အတွက်အကောင်းဆုံးသောနေ့စဉ်အရေအတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင်စမ်းသပ်ဖို့လိုသည် သင့်ရဲ့ မီဒီယာအက်ပ်။
အချက် ၇ - iat vs. Android ပလက်ဖောင်း
Android မှာ CTR များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် iOS ထက်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းသင်သတိပြုမိပါသလား။ ၎င်းသည်ပလက်ဖောင်း UX အကြားခြားနားချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
Android တွင်၊ တွန်းအားသည်အသုံးပြုသူကို ပို၍ မြင်နိုင်သည်။ သူတို့သည်ဖန်သားပြင်ထိပ်ဘက်သို့ကပ်နေပြီးသတိပေးချက်အံဆွဲကိုဆွဲချတိုင်းအသုံးပြုသူကသူတို့ကိုမြင်သည်။
iOS push များပေါ်တွင် lockscreen ပေါ်တွင်သာတွေ့နိုင်သည် - ကိရိယာသော့ဖွင့်သောအခါ၊ တွန်းသည်သတိပေးအချက်ပေးစင်တာတွင်ဝှက်ထားသည်။ နှင့်အသစ်က features တွေနှင့်အတူကန့်သတ် iOS 15 အသိပေးချက်များသတိပေးချက်များစွာသည်သုံးစွဲသူများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုမှကင်းဝေးလိမ့်မည်။
အဆိုပါသတိပြုပါ ဂဏန်း iOS နှင့် Android ကိုတွန်းအားပေးနိုင်သည့် push notifications များကိုဖတ်ရှုသူများသည်တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံကွဲပြားနိုင်သည်။
ယူကေတွင် iOS အသုံးပြုသူရာခိုင်နှုန်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်သာမကယခုအချိန်တွင် Android သုံးစွဲသူများထက်ကျော်လွန်သွားသည် မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများ၏ပရိသတ်များ နီးပါးတန်းတူဖြစ်ကြသည်။
အမေရိကန်မှာတော့ iOS အသုံးပြုသူများသည် Android ဖုန်းပိုင်ရှင်များထက်များနေသည် တည်ငြိမ်သော 17% ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာပကတိနံပါတ်များအရမီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းသည်ဗြိတိန်ထက် iOS အသုံးပြုသူများကိုယူအက်စ်တွင်ပိုမိုပါဝင်စေနိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိသင့်ရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမက်ထရစ်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ် benchmarking တဲ့အခါမှာဒီစိတ်ကိုထားပါ။
အချက် ၈။ Acquision နှင့် Engagement Tweaks
Pushwoosh ဒေတာ မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းသည် ၁၀-၅၀ ကီလိုမီတာနှင့် ၁၀၀ မှ ၅၀၀ ကီလိုမီတာရှိသည့်အချိန်တွင် CTRs သည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းပြသသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သတင်းထွက်ပေါက်တစ်ခုသည်၎င်း၏ပထမ ဦး ဆုံး ၅၀K ၀ န်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူသောအခါအသုံးပြုသူနှင့်ထိတွေ့မှုမြင့်တက်လာသည်။ အကယ်၍ မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းသည်ပရိသတ်တိုးချဲ့မှုကိုဆက်လက်အာရုံစိုက်မည်ဆိုလျှင် CTR များသည်သဘာဝကျသည်။
အကယ်၍ ထုတ်ဝေသူတစ် ဦး သည်အသုံးပြုသူရယူခြင်းအပေါ်အသုံးပြုသူနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို ဦး စားပေးလျှင်၎င်းတို့သည် CTR ကိုပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်သည်။ မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှသုံးစွဲသူ ၁၀၀K ရယူသည့်အချိန်တွင်ပုံမှန်အားဖြင့် A / B စစ်ဆေးမှုစာရင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပရိသတ်၏ ဦး စားပေးများကိုကောင်းစွာလေ့လာခဲ့သည်။ ထုတ်ဝေသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ဖြန့်ဝေထားသောအသိပေးချက်များနှင့် ၄ င်းတို့၏ထိတွေ့မှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ရန်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအပိုင်းကိုလျှောက်ထားနိုင်သည်။
သင်၏စာဖတ်သူများကိုမည်သည့် Push Notification နည်းစနစ်များအသုံးပြုမည်နည်း။
သင့်တွင်မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းများ၏တွန်းအားပေးမှုသတိပေးချက် ၁၀၄ ခုနှင့်အတူအသုံးပြုသူနှင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့်အချက်များစာရင်းရှိသည်။ ဘယ်နည်းလမ်းကသင့်အတွက်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်မလဲ။ စမ်းသပ်မှုနှင့် A / B စမ်းသပ်မှုများကပြောပြလိမ့်မည်။
သင်၏နည်းဗျူဟာကို segment နှင့် personalization အခြေခံများပေါ်တွင်အခြေခံပါ။ သင့်စာဖတ်သူများအားမည်သည့်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားများနှင့်အများဆုံးပါ ၀ င်သည်ကိုသတိပြုပါ။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်စာနယ်ဇင်းပညာ၏အခြေခံသည်မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းတွင်ပါ ၀ င်သည် - ၎င်းသည်မှန်ကန်သောပရိသတ်ထံသို့သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြန့်ဝေပေးခြင်းနှင့်၎င်းတို့နှင့်စေ့စပ်ညှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Pushwoosh သည်ပေးပို့ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည့်လမ်းကြောင်းစုံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် အသိပေးချက်များကိုတွန်း (မိုဘိုင်းနှင့် browser)၊ In-app မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ အီးမေးလ်များနှင့် multichannel ဖြစ်ရပ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဆက်သွယ်မှုများ။ Pushwoosh နှင့်အတူကမ္ဘာအနှံ့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း ၈၀,၀၀၀ ကျော်သည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၊ ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်တစ်သက်တာတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။
Tags: android ဖုန်းIn-app စာတိုများiOSiOS vs Androidမိုဘိုင်း appမိုဘိုင်း app ထိတွေ့မှုမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းမိုဘိုင်း app တွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာအကြောင်းကြားစာတွန်းpush အကြောင်းကြားစာ ctrတွန်းအားပေးအကြောင်းကြားခြင်းအချက်များpush အကြောင်းကြားစာကြိမ်နှုန်းတွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာ opt-in နှုန်းထားများတွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာ optimizationတွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာအချိန်ဇယားဆွဲpush ကိုအကြောင်းကြားစာ segmentpush မြန်နှုန်းတွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာစာရင်းဇယားသတိပေးချက်အချိန်ကိုက်Pushwosh
မက်စ်မှာဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုဖြစ်သည် Pushwosh။ သူသည် SMB နှင့်လုပ်ငန်းသုံးဖောက်သည်များအားစျေးကွက်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ၀ င်ငွေတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်၎င်းတို့၏အရောင်းအ ၀ ယ်အလိုအလျောက်စီမံချက်များကိုတိုးမြှင့်စေသည်။